बिदेशमा पसिना बगाउने श्रीमानहरूकै श्रीमतिहरू किन विग्रन्छन् नेपालमा? यस्तो हुन सक्छ, हेर्नुहाेस्
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बिग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग मस्ती, जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् । सुनौलो सपना बोकेर विदेशीएका श्रीमानले पठाएको पैसा नेपालमा बसेर अर्कैलाई ख्वाउने, प्याउने र अन्त्यमा श्रीमानको सबै कमाई कुम्ल्याएर अर्कैसंग भागेका कुराहरु हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं ।
प्रायः आफ्नै लापरबाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पीडितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ । आखिर के कारणले हो त ? बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बिग्रिनु ? उनीहरुका श्रीमतिहरु गलतबाटो रोज्न ? एउटा तितो यथार्थ हामीले विभिन्न पिडित व्यक्तिका अनुभवहरुलाई मार्फत संकलन गरी प्रस्तुत गरेका छौं । यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बिग्रिएका छन् ।
दिनहुँजसो आइरहेका समाचारहरु हेर्दा गलत बाटो अपनाउने श्रीमतिका श्रीमान कि त वैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन् या त उनीभन्दा टाढा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै आफ्नो श्रीमतिलाई सहीबाटोमा लगाउन बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसका लागि यी उपाय अपानाउँदा राम्रो हुन्छ । श्रीमिति लार्इ कत्ति पनि फ्री नछोड्नुहोस् । श्रीमतीका हरेक भनाइमा चनाखो रहनुहोस् । उनलाई व्यस्त राख्नुहोस् किनकी उनले नानाथरी कुरा दिमागमा आउने अवस्था नबनाउनुहोस् । उनि के गर्दै छिन् ,कहाँ जादै छिन् किन जादै छिन् , हरेक कुरो को जानकारी लिने गर्नुपर्छ । धेरै माया गर्छु भन्दैमा धेरै विश्वास गर्नु राम्रो हुँदैन ।